E-News Nepali || Fast and Accuracy » करुणाजी, ५५ वर्षे श्रीमानले है’रान पारे, के द’बाई छ?
म भने सुरुदेखि नै यौन लगातार अत्यावश्यक वस्तुजस्तो हुनुहुँदैन र यौ न यस्तै हुनुपर्छ भन्ने धारणाको विरोधी हुँ। उहाँको यस्ता कुरा सुन्दा मलाई निकै री’स उठ्छ। म दैनिक यौ न स म्पर्क मन पराउँदिन। यसका लागि झ’गडा पनि पर्छ। तर उहाँ मान्नु हन्न। मैले सहमतिमा हप्ताको एकपटक यौ न सम्र्पक गर्ने कुरामा सहमति गर्न बारम्बार आग्रह गरिसकेँ। उहाँ भने त्यसरी आफ्ना यौ न ईच्छालाई मार्न नसक्ने कुरा गर्नुहुन्छ।
केहीपछि उहाँको परस्त्रीसँग यौ न सम्बन्ध भएको पनि थाहा पाएँ। म सातामा एकपल्ट र उहाँ दैनिक एकपल्ट भन्ने कुरामा झगडा गर्दागर्दै हाम्रो विवाह सम्वन्ध भएको यत्रो वर्ष बितिसकेछ। मैले अहिले आएर थाहा पाएँ, उहामा मनोरोगको कारण यौ न चाहना तिब्र भएको रहेछ। यसको कुनै उपचार सम्भव छ? यसको कुनै औषधि छ? बताई दिनुभए आभारी हुनेथिएँ।
समाधानको उपाय मिसेस,-तपाईको प्रश्न पढ्दा तपाईहरुवीच शुरुदेखि नै सम्मान गर्ने स्वाभावमा कमी भएको बुझिन्छ। दुबैको यौ नईच्छाका बीच तादात्म्य नमिलेको जस्तो छ, कता कता सुसंयोजन नभएको जस्तो बुझिन्छ। तै पनि यो समस्या तपाईंहरुको मात्र होइन। यस्ता धेरै समस्या संसारभरिका मनोविद्हरुले समाधान गरिसक्नु भएको छ भन्ने कुरा सुरुमै आग्रह गर्न चाहन्छु।
धेरैअघि बेलायतमा गरिएको एउटा राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार २७.४ प्रतिशत महिलामा र २३.४ प्रतिशत पुरुषमा यौ न चाहनामा भिन्नता हुने जनाएको छ। तर, कहिलेकाहिँ महिलामा यौ न चाहना पुरुषमा भन्दा बढी हुने पनि पाइएको छ।
यस्तो हुनुका पछाडि तनाव वा हार्मोनको गडबढी, नयाँ औषधीको से’वन आदि हुन सक्छ। उच्चस्तरको सन्तुष्टि प्राप्त गर्नेमा दुईजना वीचको गुणस्तरीय सम्वाद गर्ने सीप नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने हुँदा कतै यसमा कमी आइरहेको पो छ कि खोज्न जरुरी छ। जोडीमा अन्य केही समस्या छैन भने पनि कहिलेकाहीँ यौ नका बारे वा भनौं दुवैको शरीरलाई राम्ररी बुझ्न नसकिएको अवस्थामा ठूलो समस्या नै हुने गरेको धेरै उदाहरणहरु छन्।
एकअर्कालाई दो’ष लगाउने गर्दा दैनिक जीवनमा विभिन्न समस्या सिर्जना हुन सक्छ र तपाईको स’म्बन्ध झन् जटिल बन्दै जान्छ। दुईजना वीच यौ न चाहनालाई लिएर भावना साटासाट वा भावना सञ्चार गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईको समस्याको वास्तविकतामा पुग्नु अगाडि यस्ता धेरै विषयहरुलाई केलाउनुपर्ने हुन्छ। यौन प्रवृत्तिमा कुनै फरकपन आएको हो र थप अप्ठयारो बनाउन नदिन बरु तपाईहरुको यौन ईच्छा या दैनिक जीवनका बारेमा कुरा गर्न जरुरी छ।
तपाईहरु वीच कुनै चिन्ता, मतभेद वा झगडा छ कि त्यो पनि प्रष्ट हुन जरुरी हुन्छ। हरेक व्यक्तिको यौन ईच्छा फरक हुन्छ, दुई व्यक्ति जब दाम्पत्य जीवनमा प्रवेश गर्छन्, एक अर्काको यौन ईच्छाको फरकपनलाई कसरी एकै खालको बनाउने त्यो चाही महत्वपूर्ण कुरा हो।
प्रकाशित मिति ६ कार्तिक २०७७, बिहीबार १४:४६